यर्मिया ४६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
मिश्रबारे भविष्यवाणी (१-२६)
नबुकद्‌नेजरले मिश्रलाई पराजित गर्नेछन्‌ (१३, २६)
इस्राएलसित गरिएका प्रतिज्ञाहरू (२७, २८)
४६ राष्ट्रहरूबारे भविष्यवक्‍ता यर्मियाकहाँ यहोवाको यो वचन आयो:+ २ यो सन्देश मिश्रका लागि थियो।+ यहुदाका राजा योसियाहका छोरा यहोयाकिमको शासनकालको चौथो वर्षमा+ मिश्रका राजा फारो नेकोको सेना युफ्रेटिस नदीको किनारमा थियो र बेबिलोनका राजा नबुकद्‌नेजरले* त्यसलाई कार्कमिसमा हराएका थिए। त्यस सेनाबारे परमेश्‍वरले दिनुभएको सन्देश यही हो:+ ३ “साना* र ठूला ढालहरू तयार पार। अनि युद्ध गर्न अघि बढ। ४ ए घोडचढीहरू हो, आफ्नो घोडामा काठी कस र त्यसमा सवार होओ। टोप लगाएर आ-आफ्नो ठाउँमा तयार भएर बस। भालाहरूमा धार लगाओ र कवच लगाओ। ५ ‘तिनीहरू किन भयभीत देखिन्छन्‌? तिनीहरू पछि हट्‌दै छन्‌, तिनीहरूका योद्धाहरू हारे। तिनीहरू आत्तिएर भागे, तिनीहरूका योद्धाहरूले फर्केर हेरेनन्‌। चारैतिर त्रास छाएको छ,’ यहोवा घोषणा गर्नुहुन्छ। ६ ‘छिटो दगुर्ने समेत भाग्न सकेन; योद्धाहरू उम्कन सकेनन्‌। उत्तरमा युफ्रेटिस नदीको किनारमा तिनीहरू ठक्कर खाएर लडे।’+ ७ नाइल नदीझैँ उर्लंदै आउने त्यो को हो? बढेको खोलाझैँ आउने त्यो को हो? ८ नाइल नदीझैँ उर्लंदै आउने र बढेको खोलाझैँ आउने त्यो मिश्र हो।+ अनि त्यसले यसो भन्छ, ‘म गएर पृथ्वीलाई डुबाउनेछु। म त्यस सहरलाई र त्यसका बासिन्दाहरूलाई नाश गर्नेछु।’ ९ ए घोडाहरू हो, अघि बढ! ए रथहरू हो, वेगसित कुद! योद्धाहरू अघि बढून्‌, कुस* र पत, जो ढाल बोक्छन्‌+ अनि लुदिम,+ जो धनु चलाउन* सिपालु छ,+ तिनीहरू सबै अघि बढून्‌। १० “त्यो दिन ब्रह्‍माण्डका मालिक, सेनाहरूका यहोवाको दिन हो; आफ्ना शत्रुहरूसित बदला लिने उहाँको दिन। तरबारले तिनीहरूलाई निल्नेछ र त्यो सन्तुष्ट हुनेछ। अनि तिनीहरूको रगत पिएर त्यसले आफ्नो तिर्खा मेटाउनेछ। किनकि ब्रह्‍माण्डका मालिक, सेनाहरूका यहोवाले युफ्रेटिस नदीको किनारमा रहेको उत्तरको देशमा एउटा बलिदान तयार पार्नुभएको छ।+ ११ ए मिश्रकी कुमारी छोरी! गिलादमा जाऊ र सुगन्धित लेप* लिएर आऊ।+ तिमी बिनसित्ति यत्ति धेरै उपचार गराइरहेकी छ्यौ, तिम्रो रोगको कुनै ओखती छैन।+ १२ तिम्रो सेखी झरेको कुरा राष्ट्रहरूले सुने।+ तिम्रो क्रन्दन देशभरि गुञ्जियो। एउटा योद्धा अर्कोसित ठोकिन्छ र तिनीहरू दुवै लड्‌छन्‌।” १३ बेबिलोनका राजा नबुकद्‌नेजर मिश्रलाई आक्रमण गर्न आउने विषयमा यहोवाको यो वचन भविष्यवक्‍ता यर्मियाकहाँ आयो:+ १४ “मिश्रमा यस कुराको घोषणा गर, मिग्दोलमा यो कुरा सुनाऊ।+ नोफ* र तपनेसमा यसको घोषणा गर।+ तिमीले यसो भन्‍नू, ‘आ-आफ्नो ठाउँमा तयार भएर बस। किनकि तिमीहरूवरपर भएका सबैलाई तरबारले निल्नेछ। १५ तिम्रा बलिया मानिसहरू किन नाश भए? यहोवाले तिनीहरूलाई धकेल्नुभएकोले तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा खडा भइरहन सकेनन्‌। १६ धेरै जना ठक्कर खाँदै अनि लड्‌दै छन्‌। तिनीहरू एकअर्कालाई यसो भन्दै छन्‌: “उठ! हामी आफ्ना मानिसहरूकहाँ र आफ्नो देशमा फर्कौँ किनकि यो तरबार निकै भयानक छ।”’ १७ त्यहाँ तिनीहरूले यस्तो घोषणा गरेका छन्‌, ‘मिश्रका फारो फोस्रो धाक लगाउँछन्‌। तिनले आफ्नो हातमा आएको मौका* खेर फालेका छन्‌।’+ १८ ती राजा, जसको नाम सेनाहरूका यहोवा हो, उहाँ यस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ, ‘म आफ्नै कसम खाएर भन्छु, तिनी* आउनेछन्‌ र डाँडाहरूमध्ये ताबोर डाँडाझैँ+ अनि समुद्रछेउको कर्मेल डाँडाझैँ+ खडा हुनेछन्‌। १९ हे मिश्रमा बस्ने छोरी, कैदमा जानलाई झिटीझाम्टो तयार पार किनकि नोफको* हालत यत्ति नराम्रो हुनेछ कि मानिसहरू त्यसलाई देखेर डरले थरथर काँप्नेछन्‌। त्यो आगोले खरानी हुनेछ* र त्यहाँ बस्नलाई कोही बाँकी रहनेछैन।+ २० मिश्र एउटा सुन्दर कोरलीजस्तै* छे। तर उत्तरबाट झिँगाहरू* आएर त्यसलाई टोक्नेछन्‌। २१ त्यसका ज्यालादारी सिपाहीहरूसमेत बोसो लागेका बाछाहरूजस्तै छन्‌ तर तिनीहरू पनि पीठ फर्काएर भागे। तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा खडा भइरहन सकेनन्‌+ किनकि तिनीहरूमाथि विपत्ति आइपरेको छ। तिनीहरूको लेखा लिने दिन आएको छ।’ २२ ‘त्यसको आवाज घस्रिरहेको सर्पको जस्तै छ किनकि तिनीहरू बन्चरो लिएर ठूलो सङ्‌ख्यामा त्यसको पछि लाग्दै छन्‌। रूख काट्‌ने* मानिसहरूझैँ तिनीहरू ओइरिरहेका छन्‌। २३ त्यसको जङ्‌गल घना भए तापनि तिनीहरूले त्यसलाई काटेर सखाप पार्नेछन्‌,’ यहोवा घोषणा गर्नुहुन्छ। ‘किनकि तिनीहरू सलहभन्दा धेरै छन्‌; अनगिन्ती छन्‌। २४ मिश्रकी छोरी लाजमा पर्नेछिन्‌। तिनी उत्तरका मानिसहरूको हातमा सुम्पिइनेछिन्‌।’+ २५ “सेनाहरूका यहोवा, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्छ: ‘अब म नोको*+ अमोनलाई+ अनि मिश्रका फारोलाई, मिश्रलाई, त्यहाँका देवताहरूलाई+ र राजाहरूलाई सजाय दिनेछु। हो, म फारो र तिनमा भरोसा गर्ने सबैलाई सजाय दिनेछु।’+ २६ “‘म तिनीहरूलाई तिनीहरूको ज्यान लिन खोज्ने बेबिलोनका राजा नबुकद्‌नेजरको हातमा+ र तिनका नोकरचाकरको हातमा सुम्पनेछु। तर पछि मिश्रमा पहिलेझैँ मानिसहरू बसोबास गर्नेछन्‌,’ यहोवा घोषणा गर्नुहुन्छ।+ २७ ‘तर ए मेरो दास याकुब, नडराऊ; अनि ए इस्राएल, भयभीत नहोऊ।+ किनकि म तिमीलाई टाढाको देशबाट छुटाउनेछु तिम्रा सन्तानलाई तिनीहरू कैदमा परेको देशबाट फर्काउनेछु।+ याकुब आफ्नो भूमिमा फर्केर शान्तिसित बस्नेछ र कसैले पनि उसलाई तर्साउनेछैन।’+ २८ यहोवा घोषणा गर्नुहुन्छ, ‘त्यसैले ए मेरो दास याकुब, नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु। जुन-जुन देशमा मैले तिमीलाई छरपस्ट पारेको थिएँ, म ती देशहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु।+ तर तिमीलाई चाहिँ म नाश गर्नेछैनँ,+ ठीक मात्रामा अनुशासन दिनेछु।*+ तिमी सजाय नपाई उम्कनेछैनौ।’”
^ शा., “नबुकद्‌रेजरले।” नबुकद्‌नेजर नामको अर्को हिज्जे।
^ प्रायजसो धनुर्धारीले बोक्ने ढाल।
^ शा., “धनुमा ताँदो चढाउन।”
^ वा “मेम्फिस।”
^ शा., “तोकिएको समय।”
^ यसले मिश्रमाथि विजय हासिल गर्ने व्यक्‍तिलाई जनाउँछ।
^ वा “मेम्फिसको।”
^ वा सम्भवत: “त्यो उजाड हुनेछ।”
^ वा “रगत चुस्ने झिँगाहरू।”
^ वा “दाउरा बटुल्ने।”
^ वा “थेबेसको।”